Madaxda sare ee dowlada oo isla gartay in maalinta Khamiista lagu dhawaaqo Golaha Wasiirada iyo Heshiis laga gaarey Murankii Tirada Wasaaradaha Xukuumada Cusub – idalenews.com
Heshiis kama dambeys ah ayaa xaley madaxda sare ee dowlada ka gaareen tirada golaha wasiirada ee dib u dhaca ku keentey ku dhawaaqista xubnaha golaha wasiirada ee laga dhursugayo. Waxaana warar aan la hubin oo laga xarunta madaxtooyada ay sheegayaan in la isla gartey 14 ama 18 wasaaradood midood iney noqodaan wasaaradaha dowlada, kuwaasoo maalinta beri oo Khamiis sh bisha November_na ay tahay 1da la shaacin doono dhamaan magacyada xubnaha ka mid noqon doona golaha cusub ee wasiirada ee xukuumada Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Dhanka kale, Iyadoo lagu guda jiro saacadihii u dambeeyay ee magacaabista Golaha Wasiirada cusub ayaa waxaa soo baxaya warar hididiilo u ah Haweenka Soomaaliyed, kaasoo ah in Haweeneydii u horeysay loo magacaabi doono mid ka mid ah xilalka ugu muhiimsan Golaha Wasiirada.
Guuxa ka jira Xafiisyada dowladda, goobaha lagu falan qeeyo siyaasada ayaa ah in Qof dumar ah loo magacaabi doono xilka Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare kuxigeen.
Inkastoo bogga idalenews.com aanu u suura gelin inuu helo magaca Haweeneyda, hadana wararka ay u dhaba gashay ayaa ah in qof dumar aqoonyahan ah xilka loo magacaabay, taasoo ka dambeysay wada tashiyo badan oo ay sameeyeen Madaxda dowladda.
Haweeneydan ayaa ka soo jeeda Maamulka Somaliland, iyadoo la hadal haayo in tani ay u gogol xaareyso wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland ee ay horay dowladii hore u bilowday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada waxaa uu Haweenka Soomaaliyed u muujinayay balanqaadyo ah in xilalka ugu muhiimsan ay heli doonaan, kaalinta haweenkana aanay meesha ka saari doonin.
Shaxda Golaha Wasiirada cusub ayaa ah mid ku cusub saaxada siyaasada, waxaana ay u badan tahay mid ka tiro yar Xukuumadihii hore, taasoo loo eegayo dhinaca bajadka oo noqon doona inuu ka yaraado dhaqaalihii ku bixi jiray Xukuumadihii hore.
Laakiin shakiga jira ayaa ah hadii Wasaaradaha ay noqdaan 10-Wasaaradood kaliya waxaa uu macnaheea noqonayaa inay meesha ka baxayaan beelo badan oo ku weyn doona xilal Wasiiro habka awood qeybsiga dowladda ku dhisan tahay.
Xukuumadii hore ee 18-ka wasaaradood ahaa ayaa afar beelood ay ka heleen min Afar wasaaradood iyo beesha shanaad oo heshay labo wasiir, waxaase muuqda in hadii tiradaas ka hoos dhacdo, xilalkii afarta ee beelaha waa weyn helayeen ay meesha ka baxeyso.
Ra’iisul Wasaaraha cusub Saacid ayaa hadii uu helay taageero magacaabistiisa, waxaase suura gal ah in mucaarado uu wajo marka ay shaac baxdo Golihiisa Wasiirada, hadii beeluhu ku qanci waayeen, xilka ay ka rajeynayaan.
Soomaaliya ayaa ku cusub in Qof dumar ah xil Wasiir arrimo dibadeed ka noqoto, hase yeeshee dowladaha reer galbeedka ayay u badan yihiin in Haweenka ka noqdaan Wasiir Arrimo dibadeed sida Mareykanka oo dhowr haween xilalkaas ka soo qabteen.
Waxii warar ah ee ku saabsan magacaabista golaha wasiirada kala soco website_keena idalenews.com
Siyaad Macalin Axmed idalenew@yahoo.com